प्रचण्ड–माधव पक्षको जनसभा : दुई घन्टा केपी ओलीलाई गाली ! – Nepal Press
प्रचण्ड–माधव पक्षको जनसभा : दुई घन्टा केपी ओलीलाई गाली !
२०७७ माघ ९ गते १९:४९
काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधवपक्षीय फग्लेटोले आज राजधानीमा आफ्नो शक्तिजाँच गर्यो । एक लाख जनता उराल्ने दावी गरेका सो पार्टीका नेताहरुले यो प्रदर्शनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । साथै, नेताहरुले नयाँ सन्देश केही दिन्छन् कि भन्ने कौतुहल कार्यकर्ता पङ्ती र आम सर्वसधारणमा थियो ।
अन्त्यमा बोलेका प्रचण्डमा सबैको ध्यान केन्द्रित थियो । उनले भाषण गर्ने पालो आउँदा लामो हुटिङ पनि भयो । प्रचण्डले एउटा नयाँ कुरा बोले । अदालतलाई घुमाउरो चेतावनी दिए उनले । यदि ओलीको कदमलाई अदालतले सही ठहर्याएमा शान्ति प्रक्रिया नै डिरेल हुन सक्ने प्रचण्डको चेतावनी थियो । हुन त उनले अदालतमाथि स्पष्ट धम्कीपूर्ण भाषण प्रयोग गर्ने जस्तो संकेत देखाएका थिए, तर अलि सम्हालिए ।
प्रकाशित: २०७७ माघ ९ गते १९:४९
One thought on “प्रचण्ड–माधव पक्षको जनसभा : दुई घन्टा केपी ओलीलाई गाली !”
पराजित मानसिकता भएपछि जनताकाे समय नाश गर्न थालेछन् ।